Ibhedi yeHalf Moon kunye neBreakfast Room Tamarack
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPat
Indawo ezolileyo kwaye enoxolo yokufumana iglasi yewayini, zonwabisa kwisauna. Ebusika zisa izihlangu zakho zekhephu okanye i-skis kunye nembono yasehlotyeni i-lavender ejikelezileyo kunye nezitiya ezingapheliyo. Imizuzu nje eli-10 ukusuka kuMntla Spokane.
Igumbi labucala eliphezulu elinomgangatho ophakamileyo kunye nedesika yokubhala yakudala. Uya kutshona ekuphumleni kule bhedi itofotofo yokumkanikazi. Eli gumbi likwanebhafu yabucala eneshawari ekwabelwana ngayo kunye neembono ezithambileyo zeentaba.
Kukho inja encinci enobuhlobo kwizakhiwo.
Igumbi labucala eliphezulu elinomgangatho ophakamileyo kunye nedesika yokubhala yakudala. Uya kutshona…
4.85 (iingxelo zokuhlola 60)
Ilizwe elizolileyo libekwe kwiihektare ezintlanu. Indawo ekhuselekileyo enendawo eninzi yokupaka ngaphandle kwesitalato.
Ngexesha lesidlo sakusasa